February 7, 2020 - CeleLove
တစ်လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး…
February 7, 2020 CeleLove 0
တစ်လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး… (၁) မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ ၁၀ ပုံ ၂ ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများ […]
ဝါညစ်နေတဲ့သွားကို သဘာဝအတိုင်းဖြူဝင်းလာစေမယ့်နည်းလမ်း (၅)မျိုး…
ဝါညစ်နေတဲ့သွားကို သဘာဝအတိုင်းဖြူဝင်းလာစေမယ့်နည်းလမ်း (၅)မျိုး… သွားဖြူဖြူလေးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတယ်မလား။ သွားဝါပြီး မဲညစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သွားဖြူဝင်းလာဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေများစွာရှိကြပါတယ်။ ဈေးကြီးပေးပြီး သွားဖြူအောင်လုပ်ကြတယ်သူတွေက များပါတယ်။ ပိုက်ဆံအရမ်းကြီးမကုန်ဘဲ သွားဖြူလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ သွားကိုဖြူဝင်းလာအောင်လုပ်နိုင်ပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြုံးရယ်ပြနိုင်မှာပါနော်..။ ကဲ ဘယ်လိုနည်းတွေလည်းဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်… […]
ဩစတြေးလျမှာလည်း လူတွေအပြင်မထွက်ရဲလောက်အောင် လင်းနို့တွေ သောင်းကျန်းနေ (ဗီဒီယို)
ဩစတြေးလျမှာလည်း လူတွေအပြင်မထွက်ရဲလောက်အောင် လင်းနို့တွေ သောင်းကျန်းနေ (ဗီဒီယို) လင်းနို့တွေဟာ လူသားတွေအပြင် သတ္တဝါတော်တော်များများကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ဖြန့်ဝေနေတဲ့ သတ္တဝါပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားအားလုံး ထိတ့်လန့်နေတဲ့ ရောဂါပိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကလည်း လင်းနို့တွေက စတယ်လို့ ပြောစမှတ်ပြုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ […]
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ် ဒီလိုအကျင့် (၃) ခုကြောင့် ထပ်ပြီးမနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ …
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ် ဒီလိုအကျင့် (၃) ခုကြောင့် ထပ်ပြီးမနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ … အမှားဆိုတာကတော့ လူတိုင်းနဲ့ မကင်းတဲ့အရာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်အမှားတွေ၊ အပြုအမူအမှားတွေ၊ အကျင့်စရိုက်အမှားတွေနဲ့ စိတ်ခံစားချက်အမှားတွေ ဒီလိုအမှားတွေဟာ လူတိုင်းဆီမှာ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရှိနေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ မှားမှန်းသိရက်နဲ့ ပြင်ရခက်နေတဲ့ အမှားတွေရှိနေတတ်ပြီးတော့ ပြင်ရမှာကို ကြောက်နေတတ်ကြလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲတော့ […]
ကြံရည်ကြိုက်သူများ လုံးဝကျော်မသွားနဲ့နော် ကြောက်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး…
ကြံရည်ကြိုက်သူများ လုံးဝကျော်မသွားနဲ့နော် ကြောက်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး… ကြံရည်မှာ လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ စွာသာမက ဘက်တီးရီးယားပိုး မြောက်များစွာပါဝင်တာကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ MOH မှ investigation လုပ်ရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် … ။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင် တွေဟာ ကမ္ဘာက […]
အရပ်ရှည်ချင်ရင် ဒါတွေစားပေးပါ. . .
အရပ်ရှည်ချင်ရင် ဒါတွေစားပေးပါ. . . အရပ်ရှည်ခြင်း၊ ပုခြင်းဟာ မိဘမျိုးရိုးနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုဟာ သိပ်တော့မမှန်ကန်လှပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ဟာ မျိုးရိုးကြောင့် အရပ်ပုနေမယ်ဆိုရင်တောင် အရပ်ရှည်လာအောင်ကြိုးစားဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ရေကူးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ကြိုးခုန်ခြင်း အစရှိတဲ့အားကစားနည်းတွေက သင့်ကို အရပ်ရှည်လာအောင်ကူညီပေးမှာပါ။ ထို့အတူ အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် စားသင့်တဲ့ အစားအသောက်ကောင်းများစွားလည်း […]
အကြိုက်ဆုံးပုံကို ရွေးလိုက်ပါ …သင့်ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်ကို ပြောပြပေးလိမ့်မယ်…
အကြိုက်ဆုံးပုံကို ရွေးလိုက်ပါ …သင့်ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်ကို ပြောပြပေးလိမ့်မယ်… လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံ တစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် […]
အိမ်မက်မက်တတ်ရင်…သိမ်းထားပါ….(က) မှ (မ) ထိ
အိမ်မက်မက်တတ်ရင်…သိမ်းထားပါ….(က) မှ (မ) ထိ [ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ———————————————— ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ […]
ဒီအချက် (၉)ချက်စလုံး ဖတ်လို့ နားလည်သွားရင် လူဖြစ်ရတာ ပျော်လာမှာပါ…
ဒီအချက် (၉)ချက်စလုံး ဖတ်လို့ နားလည်သွားရင် လူဖြစ်ရတာ ပျော်လာမှာပါ… ( အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ဝေမျှပေးတာပါ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ) Beabetter than you ကိစ္စတိုင်းကို နင်မှားတယ်၊ ငါမှန်တယ် လုပ်စရာမှမဟုတ်တာ။ အိမ်သူအိမ်သားနဲ့ စကားနိုင် လုတယ်၊ လုလို့နိုင်သွားတယ် […]
မြောက်ဒဂုံ ပင်လုံ cb bank ဓားပြဝင်တိုက် သိန်း(၆)ရာကျော်ပါ လက်နက်ပါ ဗုံးပါဟုဆို
မြောက်ဒဂုံ ပင်လုံ cb bank ဓားပြဝင်တိုက် သိန်း(၆)ရာကျော်ပါ လက်နက်ပါ ဗုံးပါဟုဆို မြောက်ဒဂုံ ပင်လုံ cb bank ဓားပြဝင်တိုက် သိန်း(၆)ရာကျော်ပါသွားဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေ လက်နက်ပါ ဗုံးပါသည်ဟု သိရ … ။ တရားခံကဘဏ်မှာဗုံးထားခဲ့ပြီး အဌားယာဉ်ဖြင့်ထွက်ပြေးသွားဟုသိရသည် …. ။ Photo […]